10 “Nokware, nokware, mise mo sɛ, obiara a ɔmfa ɔpon+ ano nkɔ nguannan no mu na ɔforo fa baabi foforo no, ɔyɛ ɔkorɔmfo ne odwowtwafo.+ 2 Na mmom nea ɔfa ɔpon+ ano ba mu no ne nguan+ no hwɛfo.+ 3 Ɔpon ano hwɛfo+ no bue no, na nguan+ no tie ne nne, na ɔbɔ n’ankasa nguan din frɛ wɔn de wɔn fi adi. 4 Sɛ ɔde ne de nyinaa fi adi a, odi wɔn anim na nguan no di n’akyi,+ efisɛ wonim ne nne.+ 5 Ɔhɔho de, wɔrenni n’akyi ɔkwan biara so, mmom wobeguan afi ne nkyɛn,+ efisɛ wonnim ahɔho nne.”+ 6 Yesu yɛɛ saa ntotoho yi kyerɛɛ wɔn; nanso wɔanhu nea na asɛm a ɔreka akyerɛ wɔn no kyerɛ.+ 7 Enti Yesu kaa bio sɛ: “Nokware, nokware, mise mo sɛ, mene nguan no pon+ no. 8 Wɔn a wɔde me din aba nyinaa yɛ akorɔmfo ne adwowtwafo;+ nanso nguan no antie wɔn.+ 9 Mene ɔpon no;+ obiara a ɔfa me so kɔ mu no, wobegye no nkwa, na ɔbɛkɔ mu aba na wanya adidibea.+ 10 Ɔkorɔmfo+ mma gye sɛ ɔrebewia, adi awu, na wasɛe ade.+ Me de, maba sɛnea wobenya nkwa na wɔanya no mmoroso. 11 Mene oguanhwɛfo pa no;+ oguanhwɛfo pa de ne kra to hɔ ma nguan no.+ 12 Ɔpaani+ a ɔnyɛ oguanhwɛfo na nguan no nyɛ n’ankasa dea no hu sɛ pataku reba a, ogyaw nguan no hɔ guan​—na ɔpataku no kyere wɔn bɔ wɔn hwete+— 13 efisɛ ɔyɛ ɔpaani,+ na nea ɛbɛto nguan no mfa no ho.+ 14 Mene oguanhwɛfo pa no, na minim me nguan,+ na me nguan nso nim me,+ 15 sɛnea Agya no nim me na me nso minim Agya no;+ na mede me kra to hɔ ma nguan no.+ 16 “Mewɔ nguan foforo+ a womfi ban yi mu;+ wɔn nso ɛsɛ sɛ mede wɔn ba, na wobetie me nne,+ na wɔabɛyɛ kuw biako anya ɔhwɛfo biako.+ 17 Eyi nti na Agya no dɔ me,+ efisɛ mede me kra to hɔ+ sɛnea ɛbɛyɛ a metumi anya bio. 18 Obiara nnye mfii me nsam, na mmom m’ankasa na mifi me pɛ mu de to hɔ. Mewɔ tumi sɛ mede to hɔ, na mewɔ tumi nso sɛ mesan fa.+ Minyaa eyi ho ahyɛde+ fii m’Agya hɔ.” 19 Asɛm yi maa Yudafo no mu paee bio.+ 20 Na wɔn mu pii reka sɛ: “Ɔwɔ adaemone+ na wabɔ dam. Adɛn nti na mutie no?” 21 Ebinom nso kae sɛ: “Eyi nyɛ nsɛm a efi obi a ɔwɔ adaemone hɔ. Adaemone ntumi mmue anifuraefo ani, anaa obetumi?” 22 Saa bere no na ahodwira afahyɛ adu so wɔ Yerusalem. Na ɛyɛ awɔw bere, 23 na na Yesu nenam asɔrefie hɔ wɔ Solomon abrannaa so.+ 24 Ɛnna Yudafo no twaa ne ho hyiae ka kyerɛɛ no sɛ: “Enkosi da bɛn na wobɛma yɛn kra atwɛn? Sɛ wone Kristo+ no a, ka no pen kyerɛ yɛn.”+ 25 Yesu buaa wɔn sɛ: “Maka akyerɛ mo, nanso munnye nni. Nnwuma a meyɛ wɔ Agya no din mu no, ɛno ara na edi me ho adanse.+ 26 Nanso munnye nni, efisɛ monyɛ me nguan no mu biara.+ 27 Me nguan+ tie me nne na minim wɔn, na wodi m’akyi.+ 28 Na mɛma wɔn daa nkwa,+ na wɔrensɛe da,+ na obiara renhwim wɔn mfi me nsam.+ 29 Nea m’Agya+ de ama me no sõ sen ade foforo biara,+ na obiara rentumi nhwim mfi Agya no nsam.+ 30 Me ne Agya no yɛ biako.”+ 31 Yudafo no tasee abo bio sɛ wɔrebɛtotow abɔ no.+ 32 Yesu buaa wɔn sɛ: “Mada nnwuma pa pii adi akyerɛ mo a efi Agya no nkyɛn. Nnwuma yi mu nea ɛwɔ he nti na morebesiw me abo yi?” 33 Yudafo no buaa no sɛ: “Ɛnyɛ adwuma pa bi nti na yɛrebesiw wo abo, na mmom abususɛm ntia,+ efisɛ woyɛ onipa de, nanso woyɛ wo ho onyame.”+ 34 Yesu buaa wɔn sɛ: “Wɔnkyerɛwee wɔ mo Mmara mu sɛ,+ ‘Mekae sɛ: “Moyɛ anyame”’?+ 35 Sɛ ɔfrɛɛ wɔn a Onyankopɔn asɛm ba tiaa wɔn no ‘anyame,’+ na sɛ Kyerɛwnsɛm no nyɛ nea wobetumi asan a,+ 36 moka kyerɛ me a Agya no atew me ho asoma me aba wiase no sɛ, ‘Woka abususɛm’ esiane sɛ meka sɛ meyɛ Onyankopɔn Ba+ nti? 37 Sɛ menyɛ m’Agya nnwuma a,+ munnnye me nnni. 38 Na sɛ nso meyɛ a, ɛnde sɛ me na munnye me nni a, munnye nnwuma no nni+ na moahu na moakɔ so ahu sɛ Agya no wɔ me mu na me nso mewɔ Agya no mu.”+ 39 Ɛnna wɔbɔɔ mmɔden sɛ wɔbɛkyere no;+ nanso ofii hɔ a wɔn nsa anka no.+ 40 Enti osiim bio kɔfaa Yordan so kɔɔ baabi a na kan no Yohane bɔ asu no,+ na ɔtenaa hɔ. 41 Na nnipa bebree baa ne nkyɛn na wɔkae sɛ: “Yohane anyɛ sɛnkyerɛnne biako mpo, nanso nea Yohane ka faa onipa yi ho no nyinaa yɛ nokware.”+ 42 Na pii gyee no dii wɔ hɔ.+